Daawo Sawirada: Garoonka ugu weyn ugu balaaran uguna baaxada weyn caalamka oo lasoo bandhigay. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Daawo Sawirada: Garoonka ugu weyn ugu balaaran uguna baaxada weyn caalamka oo lasoo bandhigay.
Daawo Sawirada: Garoonka ugu weyn ugu balaaran uguna baaxada weyn caalamka oo lasoo bandhigay.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-08-16 3:19 PM Garoonka Diyaaradaha Beijing ee cusub waa garoon diyaaradeed midka ugu weyn uguna balaaran caalamka waxa uuna ku yaala cirifka koonfureed ee xaafada Daxing ee magaalada Beijing.
Garoon diyaaradeedkan cusub ayaa cabirkiisu waxa uu gaarayaa 40 KM, sidoo kale waxa uu qaadaa garoonkan in badan oo diyaarado ah.
Gegidan diyaaradaha ayaa lagu tiriyaa midda ugu dhirirka badan caalamka iyada oo loo sameeyey in diyaaradda ay ku cararto 4 KM, Lacagta lagu qarash gareeyey garoonkan ayaa kor u dhaafeysa 4 Bilyan oo Dollar ka Mareykanka.
Garoonkan waxaa loo qorsheeyey iney ka duulaan sanad kasta 130 Milyan oo qof, iyada oo diyaaradaha ka bixi doono ay qaadaan 5.5 Tan oo xamuul ah guud ahaan sanad waliba, Gegidan ayaa la filayaa in lasoo gaba gabeeyo howsheyda bartamaha sanadka ina soo aadan.
Gegidan waxaa hadda ka shaqeeya shaqaale kor u dhaafaya 50 Kun oo shaqaale kuwaas oo isugu jira Injineero, Shaqaale iyo kuwa kale oo badan. waxaa la filayaa in maalin kasta garoonkan cusub uu sameeyo 1600 duulimaad, waxaase sidoo kale la filayaa iney ka baxaan ama soo galaan rubuc malyuun qof.
Halkan hoose ka daawo Sawirada Garoonka